भारतमा पहिलोपटक महिलालाई मृत्युदण्ड दिइँदै,को हुन् मृत्युदण्ड पाउने महिला ? – Himalitimes
भारतमा पहिलोपटक महिलालाई मृत्युदण्ड दिइँदै,को हुन् मृत्युदण्ड पाउने महिला ?
२०७७ फाल्गुन ५ १६:२१ मा प्रकाशित
नयाँ दिल्ली । भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको मथुरा जेलमा फाँसी घर मर्मत गर्न थालिएको छ । पाँसी घर मर्मत गरिनुको कारण हो त्यहाँ एउटा महिलालाई मृत्युदण्ड दिइँदै छ ।
स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा पहिलोपकट कुनै महिलालाई पाँसी दिन लागिएको हो । शबनम नाम गरेकी एक महिलालाई मथुरा जेलमा फाँसी दिन लागिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।जेल प्रशासनले भने ती महिलालाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको हो भनेर प्रस्ट रुपमा भनिसकेको छैन । तर, मथुरा जेलमा महिलालाई फाँसी दिने व्यवस्था छ ।
मथुरा जेलमा एक सय ५० वर्ष अघि नै फाँसी घर बनाइएको थियो । यो जेलमा महिलालाई फाँसी दिने व्यवस्था रहे पनि भारत स्वतन्त्र भए यता यो जेलमा महिलालाई फाँसी दिइएको थिएन ।हालै जेल प्रशासनले कसुरदारलाई फाँसीमा झुण्ड्याउने जल्लादलाई दुई पटक फाँसी घरको निरीक्षण गराएको बताइन्छ । उनकै सुझावका आधारमा फाँसी घरको मर्मत र फाँसीमा प्रयोग हुने डोरीसमेत मगाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाए पछि शबनले राष्ट्रपति समक्ष क्षमा याचनाको निवेदन दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले शबनमको क्षमा याचनालाई अस्वीकार गरेका कारण उनलाई अदालतको आदेश अनुसार मृत्युदण्ड दिने बाटो खुलेको हो ।
उत्तर प्रदेश राज्यको अमरोहा जिल्लाको बावनखेडी गाउँकी शबनमले आफ्नो प्रेमी सलीमसँग मिलेर १५ अप्रिल २००८ मा आफ्नै आमा, बुवासहित परिवारका ७ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेकी थिइन् ।भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शबनमले अंग्रेजी र भूगोल विषयमा एमए अध्ययन गरेकी छन् । तर उनका प्रेमी सलीमले पाँच कक्षासम्म मात्र अध्ययन गरेका छन् ।
उनीहरुबीचको सम्बन्धलाई परिवारले अस्वीकार गरेपछि दुवै मिलेर शबनमको परिवारकै हत्या गर्ने योजना बनाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
योजनाअनुसार उनीहरुले पहिला परिवारका सबै सदस्यलाई बेहोसीको औषधि खुवाएका थिए । बेहोस भएको मौका छोपी सबैलाई बञ्चरो प्रहार गरी हत्या गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
१५ जुलाई २०१० मा नै अमरोहा जिल्ला अदालतले शबनम र उनका प्रेमी सलिमविरुद्ध मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । अदालतले फैसला सुनाएको करिब ११ वर्षपछि सबनमलाई फाँसी दिन लागिएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिको विरोधमा थाल ठटाएर प्रदर्शन